गुणस्तरहिन मासु जफत गरी नष्ट – Newsagro.com :
गुणस्तरहिन मासु जफत गरी नष्ट
September 24, 2015 NewsAgro0Comments Agriculture, Consumer, meat, Nepal, Newsagro.com
यो समाचार 342 पटक पढिएको
म्याग्दी, ७ असोज /म्याग्दी सदरमुकाम बेनीबजारस्थित एक मासु पसलबाट खुलेआम बिक्री भइरहेको सडेगलेको कुखुराको मासु जफत गरिएको छ । बेनी मिट सप्लायर्सबाट कुखुराको कुहिएको मासु बिक्री भएको भन्ने गुनासो आएपछि उक्त मासु बरामद गरी नष्ट गरिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा गरिएको स्थलगत अनुगमनका क्रममा सडेगलेको तथा गुणस्तरहिन मासुलाई जफत गरिएको थियो । जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र पशु सेवा कार्यालयको संयुक्त टोलीले जफत गरेको खान अयोग्य साढे १९ केजी मासु नष्ट गरिएको म्याग्दीका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. दयाराम चापागाईंले बताए ।
प्रहरी, प्रशासन र जिल्लामा क्रियाशिल पत्रकारको रोहोवरमा कुहिएको मासुलाई नष्ट गरिएको छ । पसलको पूर्वाधार मापदण्ड अनुसार भए पनि बिक्री कक्षमा खाना अयोग्य मासु भेटिएपछि सञ्चालकलाई सचेत गराई मासुलाई नष्ट गरिएको डा. चापागार्इंले जानकारी दिएका छन् ।
यता पसल सञ्चालक भगत कार्कीले भने एक विवाहको भोजमा बचेको मासु खरिद गर्दा कुहिएको पर्न गएको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा गल्ती नदोहोर्याउने बताए । गुणस्तरहिन मासु बिक्री गर्नेलाई स्थानीय शासन ऐन २०५५ अनुसार न्यूनतम २ देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
← किसानले पाउने भए 'अनुदान' मा प्रांगारिक मल
धानमा ग्वारो रोगको प्रकोप →
यो समाचार 30259 पटक पढिएकोबुटवल । रूपन्देही मत्स्य ह्याचरीमा आत्मनिर्भर बनेको छ । माछाको पकेट जिल्ला रूपन्देहीमा माछाका भुरा उत्पादनमा
यो समाचार 29936 पटक पढिएकोरासायनिक मल अनियमितता प्रकरण काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनीले लिमिटेडले कमिसनका लागि फेरि डीएपी मल खरिद
यो समाचार 21366 पटक पढिएको GM Food Crops Illegally Growing in India • By Colin Todhunter The GM Contamination Register database is run
यो समाचार 2267 पटक पढिएकोम्याग्दी, मङ्सिर १६ गते । जिल्लाका किसान यान्त्रिक हलोतर्फ आकर्षित भएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका किसानले